Xeer ilaaliyaha UK oo Dacwad Argagxiso kusoo oogay Wiilkii Soomaaliga ahaa ee Cali Xarbi Cali - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Waxaa si rasmi ah dil argagixiso loosu soo eedeeyay wiilkii Soomaaliya ahaa Cali Xarbi Cali oo Somali-British ah, kaasoo loo heyso inuu Toorey dilay xildhibaan David Amess oo ka tirsanaa baarlamanka UK.
Siday aya shaaciyeen Booliska iyo Xeer-ilaalinta Boqortooyada UK, waxaa Cali loo heystaa denbiyo dil argagixiso oo uu ku geystay, isagoo ka duulaya dhinaca diinta, iyadoo lagu wado in Jimcaha Berri lasoo taago Maxkamad.
Cali Xarbi Cali ayaa Jimcihii tagtay lagu xiray isla goobta uu dilku ka dhacay ee magaalada Leigh-on-Sea ee bariga London, ayaa sidoo kale wajahaya dacwad labaad oo ah diyaarinta ficil argagixisanimo.
Xildhibaan David Amess, oo ahaa 69 sano jir dhalay shan caruur ah, ayaa la dilay isaga oo kulan la lahaa dadka soo doortay, wuxuuna noqday xildhibaankii labaad ee British ah ee la dilo shan sano gudahood.
Nice Price oo ah madaxda qeybta dambiyada iyo ka hor-tagga argagixisanimada ee Adeegga Xeer-ilaalinta Boqortooyada ayaa sheegay in qareenada ay gudbin doonaan in dilkii Amess “uu xiriir la lahaa aragixisanimo, gaar ahaana ay dhiiri-geliyeen arrimo diimeed iyo kuwa fikir.”
“Cali waxaa lagu soo oogay dacwad ah diyaarinta ficil argagixisanimo,” ayuu yiri. Waxa uu sheegay in tani ay ka dambeysay kadib caddeymo ay baaritaankooda kusoo heleen booliska.
Booliska ayaa sheegay inaysan jirin cid kale oo hadda loo baarayo ama raadinayo inay ku lug laheyd dilka xildhibaan David Amess.
Previous articleKuraastii ugu danbeysay Aqalka Sare oo lagu doortay Kismaayo (Akhriso magacyada)
Next articleSheekh Shaakir oo Guriceel kasoo saaray Digniin ku socota ciidamada Dowladda Federaalka